Jaamacad Dhigaysa Maado Lagu Baranayo Ronaldo
HomeWararka MaantaJaamacad Dhigaysa Maado Lagu Baranayo Ronaldo
Wargeyska Dilay Mirror ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska ayaa saaka baahiyey war ku cusub dunida waxbarashada iyo ciyaarahaba, kaas oo ah in jaamacadda British Columbia Okanagan ee ku taalla wadanka Canada ay dhigi doonto maado lagu baran doono laacibka Cristiano Ronaldo.
Poressor Luis Aguiar oo ah maskaxda alliftay in koorashkan lagu dhigo jaamacadda British Columbia Okanagan, ayaa waxa uu duubay muuqaal daawasho ah (Video) oo uu ugu magac daray ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan.
Waxa uu ku sheegay muuqaalkiisa waxyaabaha ku kallifay in uu diyaariyo maadada lagu baranayo inanka 30 jirsaday toddobaadkan ee ku xoogsada kubadda cagta.
“Waxa ka dhigay mid gaar ah, sida uu u muuqdo xattaa meelo ka baxsan dunida kubadda cagta. Waxa uu leeyahay soo jiidasho dhaqan, qurux iyo in uu saamayn ku leeyahay dhaqanka muuqaallada la isku qurxiyo, si fiican ayaanu naftiisa u xannaaneeyaa” sidaa waxa video-ga ku yidhi professor Luis Aguiar.
Professor Luis inkasta oo uu u muuqdo in uu taageero Cristiano Ronaldo, haddana waxa uu ku dooday in ay fikirkiisa ku dhalisay markii uu daawaday ciyaartii Portugal ugu soo baxay Koobkii adduunka ee uu Ronaldo ku dardaray xulka Zlatan Ibrahimovic ee Sweden.
Professor-ku waxa uu sheegay in aanu ka war haynin in uu Ronaldo ogyahay in maado ku saabsan lagu dhigayo jaamacadda iyo in kale, hase yeeshee uu jeclaan lahaa in uu Ronaldo khadka Skype kala socdo casharada lagu dhigayo fasalkaas.
“Ma ogi in uu Ronaldo maqlay kooraska iyo in kale, umana malaynayo in uu maqlay. Waxaanse jeclaan lahaa in Ronaldo uu Skype kala socdo fasalka. Waxay ila tahay in ay qurux badnaan lahayd” ayuu yidhi macallinku.
Dily Mirror waxa ay isku habaysay sawiro ay suurtogal tahay in ay noqon doonaan kuwa lagu soo bandhigi doono jaamacadda ee ay macallimiintu tusaaleyaasha ku bixin doonaan.
Doorashada Hoggaanka Xidhiidhka Ciyaaraha Fudud Ee Somaliland Oo Berri Qabsoomi Doonta
Fannaanka Cawaale Yara Oo Ka Sheekeeyey Qiso Xanuun Badan – Video